नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सँसारका कुनै देशमा नभएको चलन नेपालमा शुरु, मुखर्जी लाई बिदाइ गर्न नेपालका रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्री सम्म सबै एयरपोर्ट सम्म !
सँसारका कुनै देशमा नभएको चलन नेपालमा शुरु, मुखर्जी लाई बिदाइ गर्न नेपालका रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्री सम्म सबै एयरपोर्ट सम्म !
सँसारका कुनै देशमा नभएको चलन नेपालमा शुरु गरिएको छ । भारतीय राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी लाई बिदाइ गर्न नेपालका रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखी मन्त्री सम्म सबै एयरपोर्ट सम्म मात्र गएनन, मुखर्जीका अगाडी निरिह रुपमा प्रस्तुत भए । सार्वजनिक बिदा दिएर स्वागत गरेको सरकारले यस पटका बिगतका सबै सत्कार लाई माथ गर्दै लम्पसार परेर स्वागत गरेको र यसमा प्रचन्डकै जोडबल रहेको कुरा बाहिर अाइसकेको छ । पार्टी भित्र बिदेशी प्रभु भन्दै गाली गर्ने र सरकारमा हुँदा निर्लज्ज ढंगले भारतको दलाली गर्ने प्रचन्डको दुई जिब्रे नीति
फेरी पनि उदाङो भएको छ । नारायणहिटी राजदरबारको पावर दिल्ली सारिएको यस पटक सबैले छर्लङ मात्र भएन प्रचन्ड सरकार दिल्लीको दलाली मन्डल भएको पनि छर्लङ भयो भन्छन काठमाडौंका राजनीतिक बिश्लेसकहरु ।